YEYINTNGE(ကနဒေါ): Friday, August 20
20August 2010 ဒိုင်ယာရီ
20 August 2010 Yeiyntnge's Diary
BY YeYint Nge ... 8/20/20100comment
နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဦးဉာဏ်ဝင်းကို အရှေ့တီမောမှာ ဝိုင်းဝန်းဆန္ဒပြ
အရှေ့တီမောသမတ Jose Ramos-Horta ရဲ့ ဖိတ်ကြားချက်အရ စစ်အစိုးရ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး ဦးဉာဏ်ဝင်း သြဂုတ်လ ၂၀ ရက် ဒီကနေ့ အရှေ့တီမောနိုင်ငံကို ရောက်အလာမှာ လူ့အခွင့်အရေး လှုပ်ရှားသူတွေက ဝိုင်းဝန်းဆန္ဒပြကြပါတယ်။
အရှေ့တီမော သမတ မစ္စတာ ဟိုဆေ ရာမို့စ်-ဟိုတာ (ဝဲ) က မြန်မာစစ်အစိုးရ နိုင်ငံခြားရေး ဝန်ကြီး ဦးဉာဏ်ဝင်း (ယာ) သြဂုတ်လ ၂၀ ရက်က ဒီလီ မြို့တော်ရှိ သမတနေအိမ်သို့ လာရောက်စဉ် ရိုးရာ လက်ရက်ထည် ပေးအပ် နှုတ်ဆက်နေပုံ ဖြစ်ပါသည်။ (Photo: AFP)
မြို့တော်ဒီလီ လေဆိပ်အဝင်မှာ ဒါဇင်နဲ့ချီ ရှိနေတဲ့ လူ့အခွင့်အရေး လှုပ်ရှားနေသူတွေက ဝိုင်းဝန်း ဆန္ဒပြခဲ့ကြတာပါ။ မြန်မာ့ ဒီမိုကရေစီခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို ထိန်းသိမ်းထားတာကနေ လွှတ်ပေးဖို့ တောင်းဆို ကြွေးကြော်ခဲ့ကြပါတယ်။ အခုဆန္ဒပြနေတဲ့ အရှေ့တီမောနိုင်ငံသားတွေဟာ မြန်မာ့ ဒီမိုကရေစီ လှုပ်ရှားမှုကို ထောက်ခံအားပေးကြသူတွေ ဖြစ်ပြီး စစ်အစိုးရအနေနဲ့ နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားအားလုံး လွှတ်ပေးဖို့၊ လူ့အခွင့်အရေး ချိုးဖောက်မှုတွေကို ရပ်ဆိုင်းဖို့ တောင်းဆိုနေကြတာ ဖြစ်တယ်လို့ ဆန္ဒပြပွဲကို ဦးဆောင်သူ တဦးဖြစ်တဲ့ Carolino Marques က သတင်းထောက်တွေကို ပြောပါတယ်။ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး ဦးဉာဏ်ဝင်းရဲ့ ခရီးစဉ်ဟာ သံရုံးဖွင့်ဖို့ကိစ္စ ဖြစ်နိုင်တယ်လို့ အရှေ့တီမောနိုင်ငံမှာ နေထိုင်တဲ့ မြန်မာနိုင်ငံသားတဦးက RFA ကို ပြောပါတယ်။ “ကျွန်တော်တို့လည်း မြန်မာနိုင်ငံသားဆိုတော့ မင်းတို့ မြန်မာနိုင်ငံက ဝန်ကြီးလာမယ်လို့ အဲလို ပြောတယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ ဒီမှာလည်း အဲလို ဝန်ကြီးတွေ ဘာတွေ အရောက်အပေါက်က တော်တော် နည်းတာကိုး၊ ကျွန်တော်တို့ ဒီဖက်မှာလေ။ ကျွန်တော်တို့ ထင်တာပေါ့လေ၊ ထင်တာ သံရုံးများ ဖွင့်မလားပေါ့၊ အဲလိုမျိုးတော့ ထင်တယ်။” လေဆိပ်မှာ ဝန်ကြီး ဦးဉာဏ်ဝင်းကို ဆန္ဒပြကြသူတွေနဲ့ ရဲတွေ ထိပ်တိုက်တွေ့ခဲ့ကြတယ်လို့ သတင်းတွေမှာ ဖော်ပြထားပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံက လူ့အခွင့်အရေး ချိုးဖောက်မှုတွေနဲ့ ပတ်သက်လို့ ကန့်ကွက်ရှုတ်ချထားတဲ့ စာတမ်းတွေ၊ ပိုစတာတွေကို ရဲတွေက ဆန္ဒပြသူတွေဆီကနေ လုယူ သိမ်းဆည်းခဲ့တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ဆန္ဒပြသူတွေကလည်း စစ်အစိုးရ ကျဆုံးပါစေ၊ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို ချက်ချင်းလွှတ် စတာတွေကို တောင်းဆိုခဲ့ကြတယ်လို့ ဆန္ဒပြခေါင်းဆောင် Carolino Marques က ပြောပါတယ်။
NLD ရဲ့ ရွေးကောက်ပွဲ သပိတ်မှောက် မှု ကြေညာချက် ပြည်သူများ က တစ်ခဲနက်ကြိုဆို
အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ ချူပ်ရဲ့ရွေးကောက်ပွဲ သပိတ်မှောက်မှု သတင်းထုတ်ပြန်ချက် ကိုပြည်သူကတစ်ခဲနက် ကြိုဆိုသည် ဟု ရန်ကုန် နိုင်ငံရေး လှုပ်ရှားမှု အသိုင်း အ၀ိုင်းမှ သတင်းရရှိသည်။အမျိူးသား ဒီမို ကရေစီ အဖွဲ့ ချူပ်သည် စစ်အစိုးရက မကြာခင် ကျင်းပမည့် ရွေးကောက်ပွဲ အား သပိတ်မှောက် မည့် ကိစ္စအတွက် ပြည်သူကို ယခု ထက် ပို ၍ ဦးဆောင်လှုံဆော်မှု ပေးကာဆန့် ကျင်သင့် သည်ဟု သုံးသပ် သူများ လည်းရှိသည်။
စစ်အစိုးရ ၏ လက်ဝေခံ ပါတီ တစ်ခု ဖြစ်သည့် ကြံ့ဖွံ့ ပါတီ သည် နိုင်ငံတ၀ှမ်း ဉ် ယနေ့ ရုံးများ ဖွင့်လှစ်သည် ဟုသတင်း ရရှိသည်။ ကြံ့ဖွံ့ ပါတီသည် မြန်မာ နိုင်ငံ နေရာ အချို့ တွင် စည်းရုံးရေး များ လုပ်ဆောင် သော်လည်းပြည်သူ ၏ ပါဝင်မှု မရရှိဟု သိရသည်။
ရန်ကုန် မြို့ မှ တပ်မတော် အရာ ရှိဟောင်း တစ်ဦးက မူ NLD ကရွေးကောက် ပွဲ သပိတ်မှောက် ထားတယ်ဆိုတော့ ပြည်သူက မဲပေးမှာ မဟုတ် တော့ ဘူး …ကျွန်တော့် အနေနဲ့ လည်း မဲပေးရ အောင်အခုအချိန် ထိ တိုင်းပြည် အပေါ် ကိုယ်ကျိုးစွန့် မယ့် ကောင် တစ်ကောင်မှ မမြင် သေးဘူး အားလုံးအချောင် သမား တွေ ဟု ပြောသည်။
စစ်အစိုးရ ၏ လမ်းပြမြေပုံ ထဲ မှ နောက် ဆုံး အချက် ကို နိုဝင်ဘာ လ ၇ ရက်နေ့ တွင် အကောင်အထည်ဖော် မည် ဖြစ်သည်။ ရွေးကောက် ပွဲ တွင် ကြံ့ဖွံ့ပါတီ အနိုင်ရပါက ပြည်သူ လူထု ၏ အုံကြွမှု နှင့် ရင်ဆိုင်ရ နိုင်သည်ဟု ရန်ကုန် နိုင်ငံ ရေး အသိုင်းအ၀ိုင်း က သုံးသပ် သည်။
BY YeYint Nge ... 8/20/2010 1 comment
မင်းဟန် | သောကြာနေ့၊ သြဂုတ်လ ၂၀ ရက် ၂၀၁၀ ခုနှစ် ၁၇ နာရီ ၅၈ မိနစ်
၂ဝ၁ဝ ပြည့်နှစ် နိုဝင်ဘာ ၇ ရက်တွင် ပါတီစုံ ဒီမိုကရေစီ အထွေထွေ ရွေးကောက်ပွဲကို ကျင်းပမည်ဟု စစ်အုပ်စုက ကြေညာလိုက်၏။ ၂ဝဝ၈ ခုနှစ် ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေအရ ပြုလုပ်မည့် ရွေးကောက်ပွဲ ဖြစ်သည်။
၁၉၉ဝ ပြည့် မေ ၂၇ ရက်က ကျင်းပခဲ့သည့် ပါတီစုံ ဒီမိုကရေစီ ရွေးကောက်ပွဲနောက် နှစ်ပေါင်း ၂ဝ ကျော်အကြာတွင် ထပ်မံပြုလုပ်မည့် ရွေးကောက်ပွဲ ဖြစ်သည်။
၁၉၉ဝ ရွေးကောက်ပွဲတွင် ပြည်သူ့ဘဏ္ဍာမှ ကျပ်ငွေ ၃၅ သန်း ၆ သိန်းကျော် သုံးစွဲခဲ့ကြ၏။ ရွေးကောက်ပွဲရလဒ်က နှစ်ပေါင်း ၂ဝ ကျော်တိုင် အကောင်အထည် ပေါ်မလာခဲ့။ ယခုတကြိမ် ထပ်မံ၍ ရွေးကောက်ပွဲတရပ်ကို ကျင်းပပြုလုပ်ရန် စစ်အုပ်စုက စီစဉ်နေပြန်သည်။
စစ်အုပ်စုက ကျင်းပခဲ့သည့် ၁၉၉ဝ ရွေးကောက်ပွဲနှင့် ယခုကျင်းပမည့် ၂ဝ၁ဝ ရွေးကောက်ပွဲ ၂ ရပ်ကို နှိုင်းယှဉ်ကြည့်လျှင်ပင် လွတ်လပ်မှု၊ တရားမျှတမှုများက မတူကွဲပြား ခြားနား၍နေ၏။
၁၉၉၀ ရွေးကောက်ပွဲတွင် ပြည်သူ့ဘဏ္ဍာ ၃၅ သန်း သုံးစွဲခဲ့သော်လည်း ရလဒ်က မဖော်ဆောင်နိုင်
ပါတီစုံ ဒီမိုကရေစီ အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲ ကျင်းပရန်အတွက် (မဆလ) ပြည်သူ့လွှတ်တော်သည် ၁၉၈၈ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလ ၁၁ ရက်နေ့၌ ပုဂ္ဂိုလ် ၅ ဦး ပါ ကော်မရှင်အဖွဲ့ကို ရွေးချယ်ပေးခဲ့၏။ ဦးဘဌေး၊ ဦးစန်းမောင်၊ ဦးကျော်ညွန့်၊ ဦးစောကြာဒိုး၊ ဆရာချယ် စသည့် ပုဂ္ဂိုလ်များ ဖြစ်ကြသည်။ ထိုပုဂ္ဂိုလ်များတွင် ဆရာချယ် တဦးသည်သာလျှင် မဆလပြည်သူ့လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်တဦးဖြစ်ပြီး ကျန်သည့် ပုဂ္ဂိုလ် ၄ ဦးက မဆလအုပ်ချုပ်ရေး အာဏာပိုင်အဖွဲ့နှင့် နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းဆောင်နေကြသူများမဟုတ်ကြ။ အငြိမ်းစား အရာရှိဟောင်းကြီးများ ဖြစ်ကြသည်။ ဗိုလ်မှူးချုပ်ဟောင်းစောကြာဒိုးဆိုလျှင် ဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်းဦးနုနှင့်အတူ ဗိုလ်ချုပ်ကြီးနေဝင်းအစိုးရကို လက်နက်ကိုင်တော်လှန်ခဲ့ဖူးသည်။ အမြင်အရ ကော်မရှင်သည် လွတ်လပ်သည့် ပုဂ္ဂိုလ်များနှင့် ဖွဲ့စည်းထားသည်ဟု ဆိုနိုင်သည့် အခြေအနေဖြစ်သည်။ ကော်မရှင် ဥက္ကဋ္ဌကို ရွေးချယ်ရာတွင်လည်း ကော်မရှင်အဖွဲ့ဝင် ၅ ဦး အစည်းအဝေးမှ ဦးဘဌေးကို အများဆန္ဒနှင့် ရွေးချယ်တာဝန်ပေးခဲ့ခြင်း ဖြစ်၏။ ကော်မရှင်တွင် ဝန်ထမ်းဟူ၍ ထိုစဉ်က ကော်မရှင်ရုံးညွှန်ကြားရေးမှူး ဦးအေးမောင်သာလျှင် ကော်မရှင်အတွင်းရေးမှူးအဖြစ်နှင့် ပါဝင်ခဲ့သည်။
၂ဝ၁ဝ ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်တွင် ပါဝင်ကြသည့်သူများ အားလုံးလိုလိုက စစ်အစိုးရ လက်အောက်တွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်ဖူးသည့် ဝန်ထမ်းများ ဖြစ်ကြသည်။ ကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌ ဦးသိန်းစိုးသည်ပင် စစ်အစိုးရအဖွဲ့တွင် ဒုတိယတရားသူကြီးချုပ်တဦးအဖြစ် ထမ်းဆောင်ခဲ့သူ ဖြစ်သည်။ ဤအတွက်ကြောင့် ကော်မရှင်လုပ်ငန်းများနှင့် ပတ်သက်၍ အဆုံးအဖြတ် ကိစ္စအချို့၌ ‘အထက်သို့ တင်ပြရမည်’ ဟု ကော်မရှင် ဥက္ကဋ္ဌက ထုတ်ဖော်ပြောနေခြင်း ဖြစ်သည်။
၁၉၉၀ ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်သည် ရွေးကောက်ပွဲ ကျင်းပမည့်ရက်ကို ၆ လ ကြိုကြေညာပေး
၁၉၉ဝ ပါတီစုံ ရွေးကောက်ပွဲ ကျင်းပရန် ဦးဘဌေး ဦးဆောင်သည့် ကော်မရှင်သည် လုပ်ငန်းအစီအစဉ် ၂၆ ခုနှင့် အချိန်ဇယားကို ၁၉၈၉ ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီလ ၁၆ ရက်နေ့မှစ၍ ထုတ်ပြန်ကြေညာပေးခဲ့၏။ ရွေးကောက်ပွဲမကျင်းပမီ ၁၅ လ နှင့် ၁၁ ရက် ကြို၍ အသိပေးထုတ်ပြန်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။ နိုင်ငံရေးပါတီများ မှတ်ပုံတင်ခြင်းကို ၁၉၈၈ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလ ၂၉ ရက်မှ ၁၉၈၉ ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီလ ၂၈ ရက်အထိ ၅လ အချိန်ပေးခဲ့သည်။
ရွေးကောက်ပွဲ ကျင်းပမည့်ရက် မတိုင်မီ နိုင်ငံရေးပါတီများဖွဲ့စည်းထူထောင်၍ စည်းရုံးခွင့်ကာလ ၁၅ လ မှ ၁၈ လ အထိ အချိန်ရခဲ့ကြသည်။ ရွေးကောက်ပွဲဥပဒေနှင့် နည်းဥပဒေများကို ရွေးကောက်ပွဲ မကျင်းပမီ တနှစ်မျှ ကြိုတင်၍ တိုင်းပြည်သို့အသိပေး ထုတ်ပြန်ပေးခဲ့၏။ ၁၉၉ဝ ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်သည် ၁၉၈၉ ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလ ၁ဝ ရက်နေ့မှစ၍ ရွေးကောက်ပွဲ ကျင်းပမည့်ရက်ကို ၆ လခန့် ကြို၍ကြေညာပေးထားခဲ့ပြီး ကိုယ်စားလှယ်လောင်း အမည်စာရင်း တင်သွင်းရမည့် နေ့ရက်နှင့် ပြန်လည်၍ ရုပ်သိမ်းနိုင်သည့် နောက်ဆုံးနေ့ရက်များကိုလည်း ၄၈ ရက်မှ ၇၂ ရက်အထိ အချိန်ပေးခဲ့သည်။
ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများမှ ကော်မရှင်သို့ တင်သွင်းရမည့် ရွေးကောက်ပွဲ ကုန်ကျစရိတ်ငွေမှာ ကျပ်တသောင်းဖြစ်ပြီး ခိုင်လုံသည့်မဲ ၂ဝရာနှုန်းနှင့် အထက် ရရှိပါက ငွေတသောင်းကို ပြန်၍ ထုတ်ယူခွင့် ရှိ၏။
ယခုကျင်းပမည့် ၂ဝ၁ဝ ရွေးကောက်ပွဲနှင့် ပတ်သက်၍ ကြည့်ပါက နိုင်ငံရေးပါတီများအဖြစ် မှတ်ပုံတင်ခွင့်ကို ၂ဝ၁ဝ ပြည့်နှစ် မတ်လ ၈ ရက်တွင် နိုင်ငံရေးပါတီများ မှတ်ပုံတင်ခြင်းဥပဒေကို ထုတ်ပြန်၍ မှတ်ပုံတင်ခွင့် ပြု၏။ နိုဝင်ဘာ ၇ ရက်တွင် ပါတီစုံ ဒီမိုကရေစီ အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲကို ကျင်းပပြုလုပ်မည်ဖြစ်ရာ ရွေးကောက်ပွဲမတိုင်မီ နိုင်ငံရေးပါတီများ၏ ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက် စည်းရုံးနိုင်သည့် အချိန်ကာလက ၈ လမျှပင် မရှိ။
၂ဝ၁ဝ ပြည့်နှစ် သြဂုတ်လ ၁၃ ရက်တွင် ပြည်သူ့လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများ အမည်စာရင်း တင်သွင်းရမည့် နေ့ရက်နှင့် အချိန်ကာလကို ထုတ်ပြန်၏။ သြဂုတ်လ ၁၆ ရက်မှ ၃၁ ရက်အတွင်း တင်သွင်းကြရမည်ဖြစ်သည်။ အချိန်က ၁၇ ရက်သာ ရ၏။ ပြည်သူ့လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများအနေဖြင့် ကော်မရှင်သို့ တင်သွင်းရမည့် ငွေက ကျပ်ငွေ ၅ သိန်း ဖြစ်သည်။ ရွေးကောက်ပွဲဝင်ကြမည့် ပြည်သူ့လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများအတွက် မဲဆွယ်စည်းရုံးရန် ရရှိသည့် ကြားကာလက ၃ လပင် မပြည့်။ ရွေးကောက်ပွဲဝင်မည့် နိုင်ငံရေးပါတီများ အတွက်ကမူ တစည နှင့် ကြံ့ဖွံ့ပါတီများမှလွဲ၍ ပါတီဖွဲ့စည်းတည်ထောင်မှု အခက်အခဲ၊ ပြည်သူ့လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်လောင်းအမည် တင်သွင်းနိုင်ရေး အခက်အခဲ၊ မဲဆွယ်စည်းရုံးရေး အခက်အခဲ စသည့် အခက်အခဲပေါင်းများစွာနှင့် ရင်ဆိုင်နေရ၏။
မြို့နယ်တခု မဲဆန္ဒနယ်တခုဟူ၍ စတုတ်တိုက် ထားသည်မှာ စစ်အုပ်စုအတွက် ရည်ရွယ်ချက်ရှိ
နိုဝင်ဘာလ ၇ ရက်တွင် ကျင်းပမည့် ရွေးကောက်ပွဲဟူသည်က ပြည်သူ့လွှတ်တော်၏ ၇၅ ရာနှုန်းသော နေရာအတွက် ရွေးချယ်ကြရမည့် ရွေးကောက်ပွဲ ဖြစ်သည်။ ၁၉၉ဝ ရွေးကောက်ပွဲကဲ့သို့ ၁ဝဝ ရာခိုင်နှုန်း ရွေးကောက်ပွဲမဟုတ်။ ၂ဝဝ၈ခုနှစ် ဖွဲ့စည်းပုံတွင် ပြဋ္ဌာန်းထားသော ‘ပြည်သူ့လွှတ်တော်’ သည် လူဦးရေကို အခြေခံ၍ ဖွဲ့စည်းရမည်ဟု ဆိုသော်လည်း မဲဆန္ဒနယ်မြေသက်မှတ်ရာ၌ လူဦးရေကို အခြေခံ၍ သတ်မှတ်ရမည့်အစား မြို့နယ်တခုချင်းအလိုက် မဲဆန္ဒနယ်မြေသတ်မှတ်ပြန်သည်။ မြို့နယ်တခုချင်းစီက လူဦးရေ ထူထပ်သိပ်သည်းမှုချင်းက မတူ။ ဝေးလံသည့် တောင်တန်းဒေသရှိ မြို့နယ်၏ လူဦးရေနှင့် ရန်ကုန်တိုင်း၊ မန္တလေးတိုင်း၊ ဧရာဝတီတိုင်းတို့ရှိ မြို့နယ်တမြို့နယ်ရှိ လူဦးရေချင်းကမတူ။
ဤတွင် လူဦးရေကို အခြေခံ၍ ဖွဲ့စည်းမည့် ‘ပြည်သူ့လွှတ်တော်’ ဟူသည့် အနှစ်သာရပျက်၍နေပြီ။ ဤသို့ မြို့နယ်တခု မဲဆန္ဒနယ်တခုဟူ၍ စတုတ်တိုက်ထားသည်မှာ စစ်အုပ်စုအတွက် ရည်ရွယ်ချက်ရှိသည်။ အသစ်ဖွဲ့စည်းခဲ့ကြသည့် ရွေးကောက်ပွဲဝင်မည့် နိုင်ငံရေးပါတီများအနေဖြင့် ထိုသို့ မဲဆန္ဒနယ်မြေများတွင် သွားရောက်၍ ဝင်ရောက်အရွေးချယ်ခံရန်မှာ မည်သို့မျှမဖြစ်နိုင်။ ဤအတွက် ထိုမဲဆန္ဒနယ်မြေများသည် တစညနှင့် ကြံ့ဖွံ့အတွက် အသင့်ပြင်ထားပေးခြင်းသာဟု ဆိုရမည်။
နိုဝင်ဘာ ရွေးကောက်ပွဲတွင် ရွေးကောက်ပွဲဝင်မည့် နိုင်ငံရေးပါတီများအကြား ပြေးလမ်းက မညီ။ ‘ဝင်ချင်ဦးဟ … ရွေးကောက်ပွဲ’ ဟူ၍ပင် ညည်းရမလို ဖြစ်နေ၏။
NEJ / ၂၀ သြဂုတ် ၂၀၁၀
နိုဝင်ဘာ (၇) ရက်နေ့၌ ရွေးကောက်ပွဲကို တဖက်သတ်အနိုင်ကျင့်၍ ကျင်းပလိမ့်မည်ဟု ကမ္ဘာ့စာနယ်ဇင်းများက ဝေဖန်ရေးသားကြသည်။ အင်တာနက်ခေတ်ဖြစ်၍ နိုင်ငံတကာ၌ ထုတ်ဝေသော စာနယ်ဇင်းများတွင် မြန်မာ့ရွေးကောက်ပွဲ အကြောင်း ဖတ်ရှုရသည်။ ကမ္ဘာ့ရပ်ကွက်တွင် မြန်မာဟူသောအိမ်ထဲ၌ အိမ်စောင့် မတရားလုပ်နေသည်ကို ကြည့်မကောင်းသဖြင့် တုံ့ပြန်လိုက်ခြင်းဖြစ်ပေသည်။ သုံးလအတွင်းကျင်းပရန် ကြေညာခြင်းသည် တိုင်းပြည်ကို နအဖစစ်အစိုးရက နိုင်ငံရေးအရ ချုံခိုတိုက်ခိုက်လိုက်ခြင်းဖြစ်သည်ဟု Bangkok Post သတင်းစာ သြဂုတ်လ (၁၆) ရက်နေ့ထုတ် အယ်ဒီတာ့အာဘော်က ဝေဖန်ရေးသားလိုက်၏။ မြန်မာဗိုလ်ချုပ်များ၏ မရိုးသားမဖြောင့်မတ်သောလုပ်ရပ်ကို ကမ္ဘာက ခွင့်မပြုဟုဆို၏။ နအဖစစ်အစိုးရ ကြည်ဖြူမှ ရှင်သန်နိုင်သော နိုင်ငံရေးပါတီများဖြစ်၍ နအဖပြဋ္ဌာန်းသည့် အမိန့်ဥပဒေများကို လိုက်နာရမည်ဖြစ်၏။ နအဖစစ်အစိုးရ၏ ချုပ်ချယ်ဖိနှိပ်မှုအောက်တွင် ကျင်းပသော ရွေးကောက်ပွဲအတုကို ထောက်ခံစရာမလိုဟု Bangkok Post က ဆိုသည်။
ဤရွေးကောက်ပွဲကဲ့သို့ ကမ္ဘာက အာရုံစိုက်သော ရွေးကောက်ပွဲမရှိသေးဟု ဘန်ကောက်အခြေစိုက် The Nation သတင်းစာ အယ်ဒီတာ့အာဘော်က ဆိုသည်။ ကမ္ဘာက ဝေဖန်ရှုတ်ချနေသော်လည်း ‘နအဖ’ က ဂရုမစိုက်ဘဲ ထင်ရာလုပ်လာသည်မှာ ကြာပေပြီ။ ဤရွေးကောက်ပွဲတွင် တရားမျှတမှုနှင့် လွတ်လပ်မှု ကင်းမဲ့နေသည်ကို အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာက သိကြသော်လည်း မည်သို့မျှ မတတ်နိုင်ပါ။ မည်မျှပင် ညစ်ပတ်စုတ်ပဲ့သော ကလိမ်ကျသော ရွေးကောက်ပွဲ ဖြစ်စေကာမူ အနိုင်ရလာသော စစ်အုပ်စုပါတီကို အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာက လက်ခံမည်ဖြစ်၏။ အထူးသဖြင့် အာဆီယံအဖွဲ့သည် ရွေးကောက်ပွဲအောင်မြင်စွာ ကျင်းပနိုင်သော နအဖစစ်အစိုးရကို ချီးကျူးဂုဏ်ပြုလွှာ ဆက်သရမည်ဖြစ်သည်။ မတရားသော ရွေးကောက်ပွဲ ကျင်းပခြင်းသည် ရွေးကောက်ပွဲမရှိသည်ထက်စာလျှင် တော်သေးသည်ဟူသော မှားယွင်းသည့်အမြင်ကို နိုင်ငံတကာအသိုင်းအ၀ိုင်းက လက်ခံထားဆဲဖြစ်၏။ လွတ်လပ်၍ တရားမျှတမှုရှိပါက စစ်အစိုးရ၏ပါတီ အနိုင်မရနိုင်သည်ကို လူတိုင်းသိသည်ဟု The Nation အယ်ဒီတာက ဆိုသည်။
ဆိုင်းသံကြားရင် ကချင်သူကဲ့သို့ ရွေးကောက်ပွဲအသံကို ကြားလိုက်ရသည်နှင့် အနောက်တိုင်းမီဒီယာက သတင်းထောက်များသည် ကမ္ဘာလှည့်ခရီးသည်ဟန်ဆောင်၍ မြန်မာပြည်သို့ သွားရောက်သတင်းယူကြမည်ဖြစ်သဖြင့် နိုဝင်ဘာ (၇) ရက်၌ ကျင်းပမည့် ပါတီစုံရွေးကောက်ပွဲသည် အတုအယောင်ဆောင် ဖြစ်သည်ဟု အတိအလင်းပြောလိုကြောင်း လန်ဒန်အခြေစိုက် The Independent သတင်းစာ၏ သြဂုတ်လ (၁၄) ရက်နေ့ထုတ် အယ်ဒီတာ့အာဘော်ကဆိုသည်။ ၁၉၉၀ ရွေးကောက်ပွဲအနိုင်ရသော အန်အယ်လ်ဒီပါတီကို ပျောက်ကွယ်လုနီးပါးဖြစ်သွားအောင် ဖိနှိပ်ချုပ်ချယ်၍ ယခုတခါ စိတ်ကြိုက်ရွေးကောက်ပွဲ ကျင်းပခြင်းဖြစ်၏။ နအဖစစ်အစိုးရ တည်ထောင်ထားသော ကြံ့ဖွံ့ပါတီကြီးစိုးသည့် ရွေးကောက်ပွဲဖြစ်၍ ၀င်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ခွင့်ရသော နိုင်ငံရေးပါတီများသည် အမျိုးမျိုးနှောင့်ယှက်ခံနေရသဖြင့် မလှုပ်သာမရှားသာ စည်းရုံးရေး ဆင်းနေရ၏။ ရွေးကောက်အတုကို အသိအမှတ်မပြုဘဲ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို ထောက်ခံကြောင်း အမေရိကန်အစိုးရရော ဗြိတိသျှအစိုးရရော ကြေညာသင့်သည်ဟု The Independent သတင်းစာ အယ်ဒီတာ့အာဘော်က ဆိုသည်။
လန်ဒန်အခြေစိုက် Telegraph သတင်းစာကြီးကလည်း အတိုက်အခံပါတီများ အချိန်အလုံအလောက် မရနိုင်အောင် ရည်ရွယ်၍ ကျင်းပသော ရွေးကောက်ပွဲဟုဆိုသည်။ နိုဝင်ဘာ (၇) ရက်နေ့၌ ရွေးကောက်ပွဲ ကျင်းပပြီး (၆) ရက်အကြာ နိုဝင်ဘာ (၁၃) ရက်နေ့တွင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် နေအိမ်အကျယ်ချုပ် သက်တမ်း ကုန်ဆုံးပြီဖြစ်၍ ရွေးကောက်ပွဲနှင့် ပတ်သက်နိုင်ခြင်းမရှိအောင် စီမံထားခြင်းဖြစ်သည်ဟု ဆို၏။ ရွေးကောက်ပွဲ ၀င်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်မည့်ပါတီများသည် သြဂုတ်လ (၁၆) ရက်နေ့မှ (၃၀) ရက်အတွင်း မှတ်ပုံတင်ရမည်ဖြစ်သည်။ လွတ်လပ်မှုမရှိသည့်အပြင် အချိန်မလုံလောက်ဖြစ်နေသော ရွေးကောက်ပွဲတွင် တရားမျှတရန် ခက်ခဲသည်ဟု ဆိုသည်။ ဒေါ်စုလွတ်မည့်နေ့ကို အမျိုးမျိုးပြောနေသည်ကို တွေ့ရသည်။
Telegraph ၏ အာဘော်သည် Times of India နှင့်ဆင်သည်။ နအဖစစ်အစိုးရကို ဝေဖန်တိုက်ခိုက်သည့် အရေးအသားမျိုး ရှောင်ကြဉ်ထားသည်။ The Hindu သတင်းစာ အယ်ဒီတာ့အာဘော်ကမူ စစ်အစိုးရ အာဏာတည်မြဲရေးအတွက် လိမ်ညာသော ရွေးကောက်ပွဲသာဖြစ်သည်ဟု ဝေဖန်ရှုတ်ချထားသည်။ ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှထုတ် The New Nation သတင်းစာကမူ ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပရုံဖြင့် ဆိုးဝါးနေသော မြန်မာပြည်အခြေအနေ ပြောင်းလဲရန် အလားအလာမရှိသည်ကို သုံးသပ်ထား၏။ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေရေးရာ ပြုပြင်ရေးမလုပ်ပါက လက်ရှိရွေးကောက်ပွဲဖြင့် တိုင်းပြည်တည်ငြိမ်အောင် လုပ်နိုင်မည်မဟုတ်ဟု ဆို၏။
သြဂုတ်လ (၁၃) ရက်ထုတ် The Economist မဂ္ဂဇင်းသည် Banyan ဆိုသူ၏ ဆောင်းပါးကို ဖော်ပြထားသည်။ ယခုမှ ရွေးကောက်ပွဲ ကျင်းပမည့်နေ့ရက် သတ်မှတ်သည်မှာ ဗေဒင်ယတြာအရ လုပ်ခြင်းဖြစ်နိုင်သည်ဟုဆို၏။ ၁၉၉၀ ရွေးကောက်ပွဲကို အသိအမှတ်မပြုဘဲ အနှစ် (၂၀) ကျော် အာဏာယူထားသော အစိုးရသည် နာမည်ပျက်ခံ၍ အကွက်ဆင်ကာ ရွေးကောက်ပွဲ လုပ်ဇာတ်ခင်းနေသည်မှာ မည်သည့်အကြောင်းကြောင့် ဖြစ်နိုင်သည်ကို သုံးသပ်ထား၏။ ပထမအကြောင်းမှာ ရွေးကောက်ပွဲ ကျင်းပမှသာ တရားဝင်အစိုးရအဖြစ် သတ်မှတ်ခံရမည့်အချက် ဖြစ်ပေသည်။ ကလိမ်ကကျစ် ရွေးကောက်ပွဲကို ကမ္ဘာက အသိအမှတ်မပြုဟု ဆိုသော်လည်း မြန်မာဗိုလ်ချုပ်များကမူ ရွေးကောက်ပွဲ ကျင်းပပြီးသည်နှင့် တရားဝင်အစိုးရ ဖြစ်လာမည်ဟု ယုံကြည်နေပုံရသည်။ ဒုတိယအကြောင်းမှာ အသက်ကြီး၍ အိုနာနေပြီဖြစ်သော ဗိုလ်သန်းရွှေကို ဆက်ခံမည့်သူကို တရားဝင်တင်မြှောက်နိုင်ရန် ရွေးကောက်ပွဲ ကျင်းပခြင်းလည်း ဖြစ်နိုင်သည်။ တတိယအကြောင်းမှာ အပြောင်းအလဲလုပ်ရန် ရွေးကောက်ပွဲ ကျင်းပခြင်းလည်း ဖြစ်နိုင်၏။ မရှိသည်ထက်ရှိသည်က ကောင်းသေးသည်ဟု ဆို၏။ အလွန်စိတ်ပျက်စရာကောင်းသော တိုင်းပြည်တွင် ရွေးကောက်ပွဲ ကျင်းပသည့်အတွက် ယခင်ထက်စာလျှင် ပိုမိုပွင့်လင်းလာနိုင်ဖွယ် ရှိသည်ဟု The Economist မဂ္ဂဇင်းဖောင်းပါးတွင် ဖော်ပြထားသည်။
သြဂုတ်လ (၁၃) ရက်ထုတ် လန်ဒန်အခြေစိုက် The Guardian သတင်းစာသည် မြန်မာစစ်အုပ်စုကို ဆက်လက်ဖိအားပေးနေရန် လိုအပ်ကြောင်း ရေးသားထားသည့် ဗြိတိသျှနိုင်ငံခြားရေး ၀န်ကြီးဟောင်းဖြစ်သူ David Miliband ၏ ဆောင်းပါးကို ဖော်ပြ၏။ နိုဝင်ဘာ (၇) ရက် ရွေးကောက်ပွဲသည် လွတ်လပ်မည်မဟုတ်သကဲ့သို့ တရားမျှတမည် မဟုတ်ဟုဆိုသည်။ တိုင်းသူပြည်သားကို လည်ပင်းညှစ်သည့်ဖြစ်စဉ်သည် ဤရွေးကောက်ပွဲတွင် အမြင့်ဆုံးအဆင့်သို့ ရောက်လာသည်။ မြန်မာစစ်အုပ်စုသည် နိုင်ငံခြား၏ သဘောထားကို စောင့်ကြည့်နေသဖြင့် နိုင်ငံခြားမှ အဆက်မပြတ် ဖိအားပေးရန် လိုအပ်ပေသည်။ အခွင့်သာတိုင်း မြန်မာ့အရေးကို ဝေဖန်ဆန်းစစ်ရပေမည်။ ဘီဘီစီ ကမ္ဘာ့အသံနှင့် အခြားအသံလွှင့်ဌာနများကို နားဆင်နိုင်ရန် မြန်မာပြည်၌ ရေဒီယိုများ ဝေငှနေပြီဖြစ်သည်။ မြန်မာပြည်သူလူထုကို ကမ္ဘာက မမေ့ဘဲ စောင့်ကြည့်နေကြောင်း အမြဲတမ်းအသိပေးရမည်ဟု David Miliband က တင်ပြထားသည်။
အမေရိကန်အစိုးရနှင့် ဥရောပနိုင်ငံများသမဂ္ဂသည် နိုဝင်ဘာရွေးကောက်ပွဲကို အယုံအကြည်မရှိဟု ပြောဆိုနေကြသော်လည်း ရွေးကောက်ပွဲလုပ်မည်ဟု ကြေညာခြင်းသည် လျှို့ဝှက်စွာ ချောင်ကုပ်နေသူက ဗြောင်လုပ်မည်ဟု အပြင်လောကကို ပြောလိုက်သလိုလည်း ဖြစ်နိုင်ကြောင်း သြဂုတ်လ (၁၃) ရက်နေ့ထုတ် Los Angeles Times သတင်းစာတွင် ဖော်ပြထားသည်။ နိုဝင်ဘာ (၂၂) ရက်နေ့၌ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို လွှတ်ပေးရမည်ဖြစ်၍ မလွှတ်မီ ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပခြင်း ဖြစ်သည်ဟုဆို၏။ ထို့ကြောင့် နိုဝင်ဘာရွေးကောက်ပွဲ၏ အသွင်လက္ခဏာတရပ်မှာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို ရှောင်ကြဉ်ခြင်းလည်း ဖြစ်နိုင်ပေသည်။
EU and Canada Must Join the U.S. at the Upcoming UN Meetings in September
U.S. Supports UN Investigation into Crimes Against Humanity in Burma
A major victory for human rights in Burma! After months of rigorous campaigning by USCB and Free Burma activists around the country, the Obama administration finally agreed to support the establishment ofaUN Commission of Inquiry to investigate war crimes and crimes against humanity in Burma. This isahuge step forward and made headlines around the world. See the articles in the Washington Post and Foreign Policy.
We did it together and thank you very much for making the voices of the people of Burma heard by the White House.
However, we must continue to urge policy makers to transform their words to action. Big events are coming up at the UN. The 15th Session of UN Human Rights Council and the 65th Session of the UN General Assembly are onlyamonth away. At these meetings, the United States must rally other countries to create UN Resolutions calling on Secretary-General Ban Ki-moon to set upaCommission of Inquiry with no further delay.
To make this happen, we need the support of Canada and the EU. So far, only three members of the EU: United Kingdom, Czech Republic and Slovakia, have expressed their support for the Commission. We need other members to end their silence. We know that the Canadian government is considering supporting the Commission.
A Commission of Inquiry in Burma won't happen without the support of the international community. With onlyamonth away from UN meetings, we need you to contact the EU and Canadian Embassies/Delegations in DC and New York, by telephone, fax and email, urging these diplomats to publicly support the establishment of the UN Commission of Inquiry in Burma. Please see contact information and brief script below.
With one victory in the bag for Burma, let's work together to make another victory.
Aung Din, Jennifer, Mike and Nadi
1) Dial one of the numbers below and ask to speak to the corresponding ambassador.
Hi, May I speak to Ambassador XXX, I would like to ask them to supportaCommission of Inquiry into Crimes against Humanity and War Crimes in Burma.
(1) H.E. Mr. Gary Doer, Ambassador of Canada to the United States of America
(2) H.E. Ambassador John McNee, Permanent Representative of Canada to the United Nations
E-mail:canada@un.int or prmny@international.gc.ca
Telephone: (1) 212-848-1100
(3) H. E. Mr. Pedro Serrano, Ambassador, Acting Head of the Delegation of the European Union to the United Nations Tel. (212) 371 3804
Fax (212) 758 2718
Ms. Helen Beckman, Secretary to Head of Delegation, helen.beckman@ec.europa.eu
(4) H.E. Ambassador João Vale de Almeida, European Union Ambassador and Head of the EU Delegation to the United States
2) It is likely that they will ask you to leaveamessage.
Hi Ambassador XXXX. As you may know, today the United States pledged its support foraUN-led Commission of Inquiry into crimes against humanity in Burma. This isamuch needed step as the military regime in Burma has been brutally suppressing ethnic minorities and human rights defenders for more than four decades. Recently, the level of violence has been on the rise. Since 1996, the regime has burned down over 3,500 villages, and instances of rape and forced labor by the military are well documented. That is why I urge your country to join the United States, the United Kingdom, the Czeck Republic, Slovakia and Australia in calling for this important measure towards accountability and justice in Burma.
3) You may want to leave your number in case they would like to call you back.
If you have any further questions about why you should supportaCommission of Inquiry in Burma, feel free to call me at XXXXX
4) Thank them for taking the message!
5) Email mikejen@uscampaignforburma.org to let us know how the call went.
အနိမ့်ဆုံးဘုံလုပ်ငန်းစဉ် (Minimum Common Programme)
နှစ်ထောင့်တဆယ်ရွေးကောက်ပွဲ --- ။
နုတ်ထွက်သွားကြတယ် --- ။
အနိုင်ရအောင်လုပ်မယ့်ပွဲ --- ။
တရားမမျှတဲ့ရွေးကောက်ပွဲ --- ။
တော်လှန်ရေးတရပ် ဆင်နွှဲရာမှာ တော်လှန်ရေးအဖွဲ့အစည်းများရဲ့ အခန်းကဏ္ဍဟာ အလွန်ပဲ အရေးကြီးလှပါတယ်။ တော်လှန်ရေးဆင်နွှဲဖို့အတွက် တော်လှန်ရေးသမားတွေ စုစည်းမိလာကြတဲ့အခါ တော်လှန်ရေးအဖွဲ့အစည်းကို ဘယ်လိုသဏ္ဍာန်နဲ့ စုဖွဲ့ပြင်ဆင်မှာလဲ ဆိုတာက မေးခွန်းထုတ်စရာ ရှိလာပါတယ်။ လူအများကို အခြေပြုတဲ့ (Mass-based Revolutionary Organization) အနေနဲ့ စုဖွဲ့မှာလား၊ ထိပ်ပိုင်းက လူအနည်းစုကို အခြေပြုတဲ့ (Elite-based Revolutionary Organization) အနေနဲ့ စုဖွဲ့မှာလား၊ ဗဟိုဦးစီးစနစ် (Centralization) ကို အခြေခံမှာလား၊ ဗဟိုဦးစီးမှုဖြေလျှော့ထားသောစနစ် (Decentralization) ကို အခြေခံမှာလား ဆိုတဲ့ စဉ်းစားရွေးချယ်စရာ အချက်အလက်တွေ အများအပြား ပေါ်ထွက်လာတတ်ပါတယ်။
တော်လှန်ရေးအဖွဲ့အစည်းအတွင်းမှာ centralization စနစ်ကို ကျင့်သုံးမှာလား၊ decentralization စနစ်ကို ကျင့်သုံးမှာလား ဆိုတာက ဒီအဖွဲ့အစည်းနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်တွေကို ဘယ်လို ချမှတ် လုပ်ကိုင်ကြမယ်ဆိုတာပေါ်မှာ မူတည်ပါတယ်။ လူတယောက်ကပဲ ဦးဆောင်ပြီး ဆုံးဖြတ်ချက်တွေ အားလုံးချမှတ်မယ်ဆိုရင် centralization စနစ်ကို ကျင့်သုံးတယ်လို့ ဆိုနိုင်ပါတယ်။ ဒီလိုမဟုတ်ပဲ လူအယောက် (၁၀၀၀) ရှိတဲ့ အဖွဲ့အစည်းထဲမှာ ဆုံးဖြတ်ချက်တွေအားလုံးက လူအယောက် (၁၀၀၀) လုံးက ညီတူညာတူဆုံးဖြတ်ချက် ချမှတ်မယ်ဆိုရင်တော့ decentralization စနစ်ကို ကျင့်သုံးတယ်လို့ ဆိုနိုင်ပါတယ်။ ဒီလိုမဟုတ်ပဲ သာမန်အဖွဲ့ဝင်တွေက လုပ်ငန်းပိုင်းဆိုင်ရာ ဆုံးဖြတ်ချက်အချို့နဲ့ ခေါင်းဆောင်ငယ်တွေက ဆုံးဖြတ်ချက်အများစုကို ချမှတ်ပြီး၊ ဗဟိုအမှုဆောင်များက အရေးပါတဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်အချို့ကို ချမှတ်မယ်ဆိုရင်တော့ centralization- decentralization continuum ရဲ့ အလယ်အလတ် စနစ်ကို ကျင့်သုံးတယ်လို့ ဆိုနိုင်ပါတယ်။
တော်လှန်ရေးအဖွဲ့အစည်းရေးရာ လေ့လာဆန်းစစ်သူ Jennergren က decentralization စနစ်ကို ကျင့်သုံးတဲ့ အဖွဲ့အစည်းတွေမှာလဲ decentralized လုံးဝ မလုပ်တဲ့ အရေးကြီးဆုံးဖြတ်ချက်တွေ ရှိသေးကြောင်း ညွှန်းဆိုပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီ အရေးကြီး ဆုံးဖြတ်ချက်များ (important decisions) တွေထဲမှာ အဖွဲ့အစည်းရေးရာ ဦးတည်ချက်များ (Organizational Objectives)၊ မဟာဗျူဟာ စီမံချက်များ (Strategic Plans) နဲ့ အခြေခံမူဝါဒများ (Basic Policies) စတာတွေ ပါဝင်ပါတယ်။
စီးပွားရေးလောကက အဖွဲ့အစည်းတွေကို လေ့လာဆန်းစစ်ခဲ့တဲ့ အဖွဲ့အစည်းရေးရာ လေ့လာသူ Mintzberg က ဘဏ္ဍာရေး၊ ဥပဒေရေးရာနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်တွေကို အများအားဖြင့် ထိပ်ပိုင်းခါင်းဆောင်များက ဆုံးဖြတ်ချက်ချလေ့ရှိပြီး၊ ဈေးကွက်ရှာဖွေရေးနဲ့ ထုတ်လုပ်မှုဆိုင်ရာ ဆုံးဖြတ်ချက်တွေကို အလယ်အလတ်ခေါင်းဆောင်များက ဆုံးဖြတ်ချက်ချလေ့ ရှိကြောင်း လေ့လာတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ ဒါကြောင့် အဖွဲ့အစည်းတွေမှာ centralized decisions တွေ ရှိနိုင်သလို decentralized decisions တွေလဲ ရှိနိုင်ကြောင်း သိသာ ထင်ရှားလှပါတယ်။ centralization နဲ့ decentralization စနစ်တွေကိုပဲ သီးခြား ကျင့်သုံးတဲ့ အဖွဲ့အစည်းတွေဆိုတာ မရှိသလောက် ရှားပါးလှပါတယ်။ အဖွဲ့အစည်းရဲ့ သဘောသဘာဝပေါ် မူတည်ပြီး degree of decentralization ကတော့ ကွဲပြားခြားနားမှုရှိနိုင်ပါတယ်။
decentralization ဟာ ဆုံးဖြတ်ချက်ချမှတ်မှုတွေမှာ အခြေခံပြီး၊ ဆုံးဖြတ်ချက်ချမှတ်မှုအတွက် သတင်းအချက်အလက်ဟာ အရေးပါလာတဲ့အခါမှာ အိုင်အက်စ်လို့ခေါ်တဲ့ သတင်းအချက်အလက်စနစ် (Information System) ရဲ့ အခန်းကဏ္ဍဟာလဲ degree of decentralization အပေါ်မှာ သက်ရောက်မှု ရှိလာပါတယ်။ တိုးတက်လာတဲ့ အိုင်အက်စ်စနစ်နဲ့ centralization/ decentralization တို့အကြားက ဆက်နွယ်မှု နှစ်ခုကို ပညာရှင်တွေက ထုတ်ဖော်တွေ့ရှိခဲ့ကြပါတယ်။ ပထမတချက်အနေနဲ့ အိုင်အက်စ်စနစ်ဟာ ဆုံးဖြတ်ချက်တွေ ချမှတ်ဖို့ လိုအပ်တဲ့ သတင်းအချက်အလက်တွေကို မြန်မြန်ဆန်ဆန် ရရှိနိုင်စေတဲ့အတွက် centralization ကို တိုးမြှင့်ပေးနိုင်ပါတယ်။ အခြားတဘက်မှာလဲ အိုင်အက်စ်စနစ်ဟာ အဖွဲ့အစည်းအတွင်းက စီမံခန့်ခွဲမှုအဆင့်တိုင်းကို သတင်းအချက်အလက်တွေ ပြည့်ပြည့်စုံစုံ ရရှိအောင် ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်တဲ့အတွက် ထိပ်ပိုင်းခေါင်းဆောင်တွေအနေနဲ့ အောက်ခြေအဆင့်ဆင့်ကို ဆုံးဖြတ်ချက်ချမှတ်လုပ်ဆောင်ခွင့်တွေ ပေးအပ်နိုင်ပြီး decentralization ကို တိုးမြှင့်ပေးနိုင်ပါတယ်။
ဒါကြောင့် မတရားတဲ့ နိုင်ငံတော်အုပ်ချုပ်ရေးစနစ်ကို ဖြိုလှဲဖို့ ကြိုးစားလုပ်ဆောင်ကြတဲ့ political entrepreneurs တွေအနေနဲ့ အိုင်အက်စ်စနစ်ကို သက်ဆိုင်ရာတော်လှန်ရေးအဖွဲ့အစည်းအတွင်းမှာ အသုံးပြုဖို့ လိုအပ်ကြောင်း ပညာရှင်များကို ထောက်ပြပြောဆိုကြပါတယ်။ ဒီလိုလုပ်ခြင်းအားဖြင့် ပိုမိုထိရောက်ပြီး၊ အုပ်ချုပ်ရေးယန္တရားကို စိန်ခေါ်နိုင်မှုတွေ ပိုမိုမြင့်တက်လာနိုင်ကြောင်း ပြောကြားခဲ့ကြပါတယ်။ တော်လှန်ရေးအဖွဲ့အစည်းတွေကနေတဆင့် တော်လှန်ရေးကွန်ယက်တွေ ချိတ်ဆက်ဖွဲ့စည်းပြီး ကွန်ယက်စစ်ပွဲ (netwar) ကို ဆင်နွှဲနိုင်ကြောင်း စစ်မဟာဗျူဟာလေ့လာရေး ပညာရှင် Arquilla နဲ့ Ronfeldt တို့က အကြံပြုထားခဲ့ကြပါတယ်။
ခေတ်မီဖွံ့ဖြိုးတဲ့ နည်းပညာတွေကို အသုံးပြုခြင်းအားဖြင့် တော်လှန်ရေးအဖွဲ့အစည်းတွေဟာ အုပ်ချုပ်ရေးယန္တရားရဲ့ ဒေါက်တိုင်တွေဖြစ်တဲ့ စစ်တပ်၊ ရဲတွေကို တော်လှန်ရေးအင်အားစုကြီးတွေနဲ့ ထိပ်တိုက်တိုက်ပွဲဝင်စရာမလိုပဲ အုပ်ချုပ်ရေးယန္တရားလည်ပတ်မှုတွေကို တိုက်ရိုက်တိုက်ခိုက် လာနိုင်စေပါတယ်။ ဒီကဏ္ဍနဲ့ပတ်သက်တဲ့ ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များကတော့ အာဏာရှင်ယန္တရားကို ထောက်ကူပေးတဲ့ ဘဏ်တခုကို လူအင်အားသုံးပြီး ၀င်ရောက်စီးနင်းတိုက်ခိုက်တာထက် ဒီဘဏ်လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုကို ထိန်းချုပ်ထားတဲ့ ကွန်ပြူတာစနစ်ကို တိုက်ခိုက်နိုင်မှုက ပိုပြီး ထိရောက်မှုရှိလာကြောင်း ပြောဆိုလာကြပါတယ်။
ဒါပေမယ့်လဲ ခေတ်မီတိုးတက်တဲ့ အိုင်တီစနစ်၊ အိုင်အက်စ်စနစ်တွေကို အသုံးပြုခြင်းအားဖြင့် အဖွဲ့အစည်းရဲ့ လုံခြုံရေး (security of the organization) ကို ထိခိုက်မှု ရှိစေနိုင်ကြောင်းကိုလဲ ထောက်ပြပြောဆိုခဲ့ကြပါတယ်။ နိုင်ငံရေးပညာရှင် Bell ဆိုခဲ့တဲ့အတိုင်း တော်လှန်ရေးအဖွဲ့အစည်းတွေ ပတ်သက်တဲ့ old wives' tale တခုရှိပါတယ်။ ဒါကတော့ အဖွဲ့အစည်းရဲ့ လုံခြုံရေး (Security of the organization) နဲ့ လုပ်ငန်းတာဝန်တွေကို ပြီးမြောက်အောင်မြင်အောင် လုပ်ဆောင်နိုင်မှု (efficiency) တို့ အကြားမှာ ပြောင်းပြန်ဆက်စပ်မှု (inverse relation) ရှိနေတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
လုံခြုံရေးဆိုတာက နိုင်ငံတော်အုပ်ချုပ်ရေး ယန္တရားရဲ့ ချေမှုန်းနိုင်စွမ်းကို တောင့်ခံနိုင်မှုနဲ့ သတင်းအချက်အလက်ပေါက်ကြားမှုကို ထိန်းချုပ်နိုင်မှုတွေနဲ့ သက်ဆိုင်ပါတယ်။ Efficiency ဆိုတာကတော့ ချမှတ်ထားတဲ့ စီမံချက်တွေကို ပြီးမြောက်အောင်မြင်အောင် လုပ်ဆောင်နိုင်မှု ဖြစ်ပါတယ်။ ကမ္ဘာတ၀ှမ်းတော်လှန်ရေးအဆက်ဆက်ရဲ့ သင်ခန်းစာများအရ Efficiency ကို အာရုံစိုက် လုပ်ဆောင်မှုများလေလေ၊ အဖွဲ့အစည်းရဲ့ လုံခြုံရေးကို ထိခိုက်လေလေပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ မဟာဗျူဟာလေ့လာသူ McCormick က တော်လှန်ရေးအဖွဲ့အစည်းတွေဟာ ဗဟိုဦးစီးချုပ်ကိုင်မှုကို လျှော့ချပြီး ကွန်ယက်ချိတ်ဆက်မှုတွေ၊ decentralization process တွေကို အကောင်အထည်ဖော်တဲ့အခါ အချိန်အနည်းငယ်အတွင်း Efficiency ဖြစ်အောင် လုပ်ဆောင်နိုင်မှသာ အောင်ပွဲကို ရမှာဖြစ်ပြီး၊ အချိန်ကြာလာခဲ့ရင်တော့ တော်လှန်ရေးအဖွဲ့အစည်းရဲ့ လုံခြုံရေးကို ထိခိုက်မှု ပိုများလာတာနဲ့အမျှ ပျက်စီးတိမ်ကောသွားနိုင်ကြောင်း ဖော်ထုတ်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ ဒါကြောင့် တော်လှန်ရေးအဖွဲ့အစည်းတွေအနေနဲ့ ရေတိုကာလမှာ Efficiency ရဖို့အတွက် ရေရှည်ရပ်တည်နိုင်မှုရဲ့ security ကို ဘယ်လောက်အတိုင်းအတာအထိ sacrifice လုပ်ဖို့သင့်သလဲဆိုတာကို တိုက်ပွဲဖော်ဆောင် လှုပ်ရှားမှု သဏ္ဍာန်တိုင်းမှာ ရွေးချယ်ဆုံးဖြတ်နိုင်ကြဖို့ လိုအပ်လှပါတယ်။
ဒီလိုမဟုတ်ပဲ ဗဟိုဦးစီးစနစ်နဲ့ မြေအောက်ဆဲလ်တွေအပေါ်မှာ အခြေခံတည်ဆောက်မှုသဏ္ဍာန် (hierarchical cell-based organization) ကနေ ကွန်ယက်သဏ္ဍာန် (network structures) ကို ကူးပြောင်းမှု လုပ်မယ်ဆိုရင်လဲ တိုးတက်ပြောင်းလဲလာတဲ့ efficiency နဲ့ ညီမျှတဲ့ security ကို တပြိုင်တည်း တိုးမြှင့်ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ Network structures ပေါ် အခြေခံတဲ့ ချိတ်ဆက်မှုတွေမှာ အဖွဲ့အစည်းငယ်လေးတွေ (nodes) အများအပြား ပါဝင်ပြီး၊ ဒီ nodes တွေအကြားက ဆက်စပ်မှု၊ ဆက်သွယ်မှု (interconnections) တွေလဲ အများအပြား ပါရှိတဲ့အတွက် သတင်းလုံခြုံရေး ရဖို့ဆိုတာကတော့ အလွန်ခဲယဉ်းတတ်ပါတယ်။ Node တခုကို နိုင်ငံတော် အုပ်ချုပ်ရေးယန္တရားဒေါက်တိုင်တွေက ခြေရာခံမိတာနဲ့ Network structure ကြီးတခုလုံးကို ရန်သူက ဖြိုခွင်းနိုင်ဖို့ လမ်းဖွင့်ပေးလိုက်သလို ဖြစ်သွားတတ်ပါတယ်။ ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် centralization မှာ အားသာတဲ့ အဖွဲ့အစည်းတွေက security ကောင်းမွန်ပြီး ရေရှည်မြှုပ်နှံဖို့ လိုအပ်တဲ့ တော်လှန်ရေးအတွက် ပိုပြီး အသုံးဝင်တတ်သလို၊ decentralization မှာ အားသာတဲ့ အဖွဲ့အစည်းတွေက efficiency တိုးမြှင့်ပေးနိုင်တဲ့အတွက် ရေတိုတော်လှန်ရေးကာလအတွင်း အောင်ပွဲရနိုင်မှုအတွက် အသုံးဝင်တတ်ပါတယ်။ သက်ဆိုင်ရာ တော်လှန်ရေးရဲ့ ရေတိုရေရှည် အတိမ်အနက်ကို မှန်မှန်ကန်ကန် သုံးသပ်တွက်ချက်နိုင်ဖို့ပဲ လိုပါတယ်။ မဟုတ်ရင်တော့ ရေရှည်မြှုပ်နှံရမယ့် မြေအောက်တော်လှန်ရေးအချိန်မှာ ပဲ့ကထောင်၊ ဦးကနင်းနဲ့ ကသောင်းကနင်း decentralization အဖွဲ့အစည်းတွေ မှိုလိုပေါက်လာပြီး၊ ရေတိုကာလအတွင်း အဆုံးသတ်တိုက်ပွဲနွှဲရမယ့် အချိန်မှာကျတော့မှ ဟိုအဖွဲ့ကလဲ နှစ်ယောက်တပိုင်း၊ ဒီအဖွဲ့ကလဲ မချိသာမဆန့်သာနဲ့ မပီမပြင်ထွက်ပေါ်လာတာမျိုးတွေ ကြုံတွေ့ကြရမှာပဲ။
တော်လှန်ရေးအဖွဲ့အစည်းတွေမှာ elite-based နဲ့ Mass-based organization ကွဲပြားမှုတွေလဲ ရှိပါသေးတယ်။ centralization/ decentralization ကွဲပြားမှု သဏ္ဍာန်လိုပါပဲ။ continuum အနေနဲ့သာ ရှိပါတယ်။ ရေပေါ်ဆီအခြေပြုအဖွဲ့အစည်းနဲ့ လူထုအခြေပြု အဖွဲ့အစည်းဆိုပြီး သီးခြားခွဲထုတ်နိုင်ဖို့ကတော့ အလွန်ခဲယဉ်းလှပါတယ်။ အဖွဲ့အစည်းတခုဟာ elite-based လား၊ mass-based လားဆိုတာကို ပညာရှင်အများစုက အဖွဲ့အစည်းရဲ့ အရွယ်အစားနဲ့ ခေါင်းဆောင်တွေရဲ့ စွမ်းရည်တွေနဲ့ တိုင်းတာလေ့ရှိကြပါတယ်။ အလွယ်တကူ စဉ်းစားနိုင်တဲ့ နည်းလမ်းတခုကတော့ တော်လှန်ရေးအဖွဲ့အစည်းတခုမှာ ရှိနေတဲ့ ထိပ်ပိုင်းခေါင်းဆောင် ဆယ်ယောက်ကို ဖမ်းဆီးထောင်ချလိုက်ရင် (သို့မဟုတ်) လုပ်ကြံသတ်ဖြတ်လိုက်ရင် ဒီအဖွဲ့အစည်းရဲ့ အောင်ပွဲရနိုင်မှု စွမ်းရည် ကျဆင်းသွားမှု ရှိမရှိ ဆိုတာပါပဲ။ ဒီလိုဖြစ်မယ်ဆိုရင်တော့ ဒါကို elite-based revolutionary organization လို့ သတ်မှတ်နိုင်ပါတယ်။ ဒီလိုမဟုတ်ပဲ အဖွဲ့အစည်းအတွင်းမှာ ပါဝင်တဲ့ အဖွဲ့ဝင်တ၀က်ကျော်ကို ချေမှုန်းနိုင်မှသာ အောင်ပွဲရနိုင်မှု စွမ်းရည် ကျဆင်းသွားမယ်ဆိုရင်တော့ ဒါကို mass-based revolutionary organization လို့ သတ်မှတ်နိုင်ပါတယ်။
တော်လှန်ရေးတရပ်ဆင်နွှဲရာမှာ ပါဝင်တဲ့ တော်လှန်ရေးအဖွဲ့အစည်းတွေဟာ elite-based များနေရင် နိုင်ငံတော်အုပ်ချုပ်ရေးယန္တရား ဒေါက်တိုင်တွေအနေနဲ့ ဖြိုခွင်းရ လွယ်ကူပါတယ်။ ဒီလိုအာဏာပိုင်တွေ ဘက်ကနေ ထိပ်ပိုင်း ခေါင်းဆောင်များကို ဖမ်းဆီးထောင်ချခြင်း၊ လုပ်ကြံသတ်ဖြတ်ခြင်းအားဖြင့် တော်လှန်ရေးဟာလဲ ကြန့်ကြာနေတတ်ပါတယ်။ Mass-based များနေရင်တော့ ဖြိုခွင်းရ ခက်ခဲတတ်တာကြောင့် တော်လှန်ရေးဘက်မှာ ပိုပြီး အားသာချက်ရှိလာနိုင်ပါတယ်။
စစ်ပညာရှုထောင့်က ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ သက်ဆိုင်ရာ တော်လှန်ရေးအဖွဲ့အစည်းရဲ့ centre of gravity ဟာ ဘယ်မှာတည်ရှိနေလဲဆိုတာကို သိလာတာနဲ့အမျှ အဖွဲ့အစည်းရဲ့ elite-based, mass-based သဏ္ဍာန်ကို ဆန်းစစ်နိုင်လာပြီး၊ ဒီအဖွဲ့အစည်းရဲ့ အောင်မြင်နိုင်မှုအတိုင်းအတာကို သုံးသပ်မှန်းဆနိုင်တယ်လို့ ဆိုရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ရူပဗေဒပညာရပ်မှာ centre of gravity ဆိုတာ ရုပ်ဝတ္တုတခုရဲ့ ရွေ့လျားခြင်း၊ လည်ပတ်ခြင်း၊ ရွေ့လျားမှု ရပ်ဆိုင်းခြင်းတွေကို ဖြစ်ပေါ်စေတဲ့ extraneous forces အားလုံး ဆုံတဲ့ ဆုံမှတ်ကို ခေါ်ဆိုတာဖြစ်ပါတယ်။ စစ်ပညာရှင် ကလော့ဝတ်စ်က စစ်တပ်များ တပ်စွဲနေရာယူမှုတွေကို ဖော်ပြတဲ့အခါမှာ ဒီသဘောတရားကို ပြန်လည်အသုံးပြုခဲ့ပါတယ်။ တနည်းဆိုရင် centre of gravity ဆိုတာ ပါဝါနဲ့ လှုပ်ရှားမှုတွေ အားလုံးတည်မှီနေတဲ့ hub တခုလို့ ဆိုနိုင်ပါတယ်။ တိုက်ပွဲတခုရဲ့ အရှုံးအနိုင်ကို အဆုံးအဖြတ်ပေးနိုင်သော၊ အားအကောင်းဆုံးသော တပ်ရင်း၊ တပ်မတွေကို centre of gravity အနေနဲ့ conventional war တွေမှာ သတ်မှတ်လေ့ရှိကြပါတယ်။
နိုင်ငံတကာရာဇ၀တတရားရုံးမှာ ပြစ်မှူတွေတသီတတန်းကြီးနဲ့ နအဖစစ်အုပ်စုတခုလုံး ပြေးလို့မလွပ်တဲ့အခြေအနေတွေ
အမေရိကန်သမတအိုဘားမားကနေပြီး ကုလသမဂ္ဂမှာ မြန်မာနိုင်ငံစစ်အစိုးရကို ရာဇ၀တ်ကောင်အဖြစ် ခုံရုံးတင်စစ်ဆေးဖို့ကို တောင်းဆိုလိုက်ပြီဖြစ်တယ်။ မြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတွေကို အပြစ်မဲ့သတ်ဖြတ်နှိပ်စက်မှူတွေ ၊ လူ့အခွင့်အရေးချိုးဖေါက်မှူတွေကြောင့် ကုလသမဂ္ဂအထွေထွေညီလာခံကို စုံစမ်းစစ်ဆေးဖို့ တောင်းဆိုတဲ့အခါမှာ နအဖစစ်အုပ်စုတွေရဲ့  ပြစ်မှူဆိုင်ရာများကို ကျူးလွန်ခြင်းရှိ မရှိဆိုတာနဲ့ ပါတ်သက်လို့ လေ့လာကြည့်ကြပါတယ်။ ဒီတော့နအဖစစ်အုပ်စုဟာ နိုင်ငံတကာရာဇ၀တ်တရားခုံရုံးမှာ လွပ်မြောက်နိုင်ပါသလား။ ဘယ်လိုနည်းနဲ့မှ မလွပ်မြောက်နိုင်ကြောင်း အခုတင်ပြမဲ့ ပြစ်မှူဆိုင်ရာများက ဖေါ်ပြထားပါတယ်။
International Criminal Court ရဲ့  နိုင်ငံတကာတရားဥပဒေဆိုင်ရာအသုံးအနှုံးတွေထဲမှာ ( Genocide ) ဆိုတဲ့ဝေါဟာရစကားလုံးကို လူမျိုးတုံးသတ်ဖြတ်မှူလို့ ပြောထားပေမဲ့ အဓိပ္ပါယ်တခုတည်းမဟုတ်ဘူးလို့ ဖွင့်ဆိုထားးပါတယ်။ အဲဒီနိုင်ငံတကာ ရာဇ၀တ်မှူဆိုင်ရာတရားရုံးရဲ့  အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက်အရ ( Genocide ) ဆိုတာဟာ နိုင်ငံသား ၊ လူမျိုးစု၊ မျိုးနွယ်စု၊ သို့မဟုတ်၊ ဘာသာရေးနှင့်ဆိုင်သော အုပ်စုတစု၊ သို့မဟုတ်အုပ်စုအားလုံး၊ သို့မဟုတ် အစိပ်အပိုင်းတခုခုကို သို့မဟုတ် တချို့ ကို ဖျက်ဆီးပစ်ဖို့ ရည်ရွယ်ပြီး ကျူးလွန်တယ်ဆိုရင် မည်သည့်ပြစ်မှူကိုမဆိုကျူးလွန်ခြင်းဖြင့် ( Genocide ) အဓိပ္ပါယ်ဖြစ်တယ်လို့ ဖေါ်ပြထားပါတယ်။
Genocide ရဲ့ အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက်ကို တခုချင်းလေ့လာကြည့်ကြပါစို့။
၁ ။။။။ လူအုပ်စု၏အဖွဲ့ဝင်များကို သတ်ဖြတ်ခြင်း သို့မဟုတ် လူမျိုးစုနွယ်များကို သတ်ဖြတ်ခြင်း။
၂ ။။။။ လူအုပ်စု သို့မဟုတ် လူမျိုးနွယ်စုအဖွဲ့ဝင်များကို ကိုယ်ထိလက်ရောက်သော်၎င်း၊ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာသော်၎င်း၊ ပြင်းထန်စွာအန္တရယ်ပြု ခြင်း။
၃ ။။။။ လူအုပ်စု သို့မဟုတ် လူမျိုးနွယ်များ၏ လူနေမှူဘ၀အခြေအနေများကို ထိခိုက်နစ်နာအောင် တမင်တာရည်ရွယ်၍ လူမျိုးနွယ်စု တခုလုံးကို သို့မဟုတ် အစိပ်အပိုင်းကို သို့မဟုတ် အုပ်စုတခုလုံးကို ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအားဖြင့် ထိခိုက်
၄ ။။။။ လူမျိုးနွယ်များ သို့မဟုတ် လူအုပ်စုအတွင်းကလေးမွေးဖွါးမှူ ( မျိုးပွါးမှူ ၊လူဦးရေတိုးပွါးမှူ) တို့ကို တားဆီးပိတ်ပင်ရန် ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် စည်းကမ်းချက်များ သတ်မှတ်ပြီး လိုက်နာစေခြင်း။
၅ ။။။။ လူအုပ်စုတစု သို့မဟုတ် လူမျိုးနွယ်စုတစုမှ ကလေးများအား တခြားလူအုပ်စုတခုအတွင်းသို့ အတင်းအဓမ္မပြောင်းရွှေ့စေခြင်း ။။
ဒီအချက်တွေကို ကျူးလွန်တာဟာ ( Genocide ) ရာဇ၀တ်ပြစ်မျူများကို ကျူးလွန်ခြင်းဖြစ်တယ်။ ဒီအချက်တွေထဲက တချက်ချက်ကို ကျူးလွန်ခဲ့ရင် ဒါမှမဟုတ် တချို့ ကိုကျူးလွန်ခဲ့ရင် ဒါမှမဟုတ် အားလုံးကို ကျူးလွန်ခဲ့ရင်
( Genocide ) ခေါ်တဲ့ ရာဇ၀တ်ပြစ်မှူများကို ကျူးလွန်ခြင်းဖြစ်တယ်လို့ ဖေါ်ပြထားတယ်။
ဒါဖြင့်ရင် နအဖစစ်အုပ်စုတွေဟာ Genocide ဆိုတဲ့ ပြစ်မှူဆိုင်ရာအားလုံးကို ကျူးလွန်ထားတဲ့သူဖြစ်တဲ့အတွက် ဒီတခါတော့ ရာဇ၀တ်ဘေး ပြေးမလွပ်တော့ဘူးဆိုတာကို လူတိုင်းလိုလို သိရှိနေကြပြီဖြစ်ပါတယ်။ အထူးသဖြင့် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးသန်းရွှေဟာ ဒီGenocide ဆိုတာကို ပိုပြီူးတော့တောင် သိရှိနေပြီဖြစ်တယ်။ သူတို့စစ်အုပ်စုကို နိုင်ငံတကာရာဇ၀တ်တရားခုံရုံးကို တင်ကြဖို့ မြန်မာနိုင်ငံဒီမိုကရေစီအင်အားစုတွေက အားကြိုးမန်တက် ၀ိုင်းဝန်းလုပ်ဆောင်ပြီး Genocide ပြစ်မှူကို ကုလသမဂ္ဂက အရေးယူနိုင်ရန် တောင်းဆိုကြရန်အထူးလိုအပ်နေပြီဖြစ်ပါတယ်။
နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဦးဉာဏ်ဝင်းကို အရှေ့တီမောမှာ ...
NLD ရဲ့ ရွေးကောက်ပွဲ သပိတ်မှောက် မှု ကြေညာချက် ပြည်...
EU and Canada Must Join the U.S. at the Upcoming U...